Banyere Anyị - Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. nke e guzobere na 1995, nwere ihe karịrị afọ 25 na mpaghara nke akwa. Ebere maka imepụta akwa dị elu yana ịnye ọrụ kacha mma, anyị erewo ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba na mpaghara dịka America, Europe, Australia na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. ọkachamara na mmepe na ntinye nke egwuregwu egwuregwu n'èzí na ime ụlọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, n'ihi nchegbu mba ụwa nke mmetọ plastik, ụlọ ọrụ anyị na-agbanwe ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa na-adịgide adịgide. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị enwetala asambodo GRS ma bụrụ onye na-azụ ahịa ngwa ngwa.